विबाह गरेको छोटो समयमा नै चर्चित युट्युबर हिमशे न्यौपाने र मेघाबिच के भयो यस्तो ? धरधर्ती आँसु झार्दै मेघा मिडियामा आइन् – Gazabkonews
विबाह गरेको छोटो समयमा नै चर्चित युट्युबर हिमशे न्यौपाने र मेघाबिच के भयो यस्तो ? धरधर्ती आँसु झार्दै मेघा मिडियामा आइन्, अरुलाई सहयोग गर्ने र उद्धार गर्ने यो जोडी नै किन …?
चर्चित नायक पुष्प खड्का र नायिका साम्राज्ञी प्रेममा रहेको चर्चाकाबिच यस्तो भिडियो बाहिरियो, यस्तो रो मा न्सले भरिएको भिडियो बाहिरिएपछि यि दुवै अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन
अभिनेता राजेश हमालले बुधबार परेको आफ्नो जन्मदिन धरहरा पुगेर त्यहाँका मजदुरमाझ केक काटेर बनाएका छन् । गत वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको धरहरामा पुगेर हमालले जन्मदिन मनाएका हुन् ।हमालसँग उनी पत्नी मधु भट्टराई पनि धरहरा पुगेकी थिइन् ।
हमालले सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियोमा उनी र पत्नीलाई धरहराबाट काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्दै केक काटेको देख्न सकिन्छ ।
हमाल निकट स्रोतका अनुसार उद्घाटन भए पनि अझै निर्माण चरणमा रहेको धरहरा पुगेर त्यहाँका मजदुरलाई हौसला बढाउन जन्मदिनको केक काटिएको हो । धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छैन ।
चर्चित नायक पुष्प खड्का र नायिका साम्राज्ञी प्रेममा रहेको चर्चाकाबिच यस्तो भिडियो बाहिरियो, यस्तो रोमान्सले भरिएको भिडियो बाहिरिएपछि यि दुवै अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन, सामाज्ञीको फोनमा गोप्य रहेको भिडियो मोवाइल पसलेलाई बनाउन दिँदा पसलेले भाइरल गराइदिइएको पुष्पले लगाए आरोप
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.८ अंक घटेर २९४४.७८ विन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेले यस दिन अघिल्लो कारोबार दिन भएको करेक्सनलाई नै निरन्तरता दिएको हो।अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात बुधबार नेप्सेमा साढे १३ अंकको करेक्सन भएको थियो। सो दिन नेप्सेले ३००० विन्दु पार गरेपछि बजारमा बिक्री चाप बढेपछि करेक्सन भएको थियो।
नेप्से परिसूचक ओरालो लागेपनि यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स भने साढे २ अंक बढेको छ। यस दिन फ्लोट इण्डेक्स ०.३७ अंक घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.४ अंक बढेको छ।यस दिन नेप्से ओरालो लागेपनि कारोबार रकम भने १६ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। बिहीबार २२० कम्पनीको १ लाख ५५ हजार ६९० पटकको कारोबारमा १६ अर्ब १० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ६ लाख ६ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य बढेसँगै यस दिन जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक पनि सर्वाधिक बढेको छ। यस दिन उकालो लागेका ६ उपसमूहमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.९९ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक यस दिन २.६३ प्रतिशत र वित्त उपसमूहको २.५७ प्रतिशत बढेको छ।
यस दिन जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा भने यस दिन एचआईडिसीएल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको हकप्रद शेयर सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन भएका कारण सर्वाधिक कारोबार भएको हो।
हिरोइन भन्दा राम्री यि पत्निलाई विबाह गरेको केही दिनबाट नै हे ला गर्न थाले यि पतिले